Na-eto eto nduku n'ebe ndịda Brazil. Ahụmahụ nke onye ọrụ ugbo - Magazine System Magazine
Aha m bụ Adriel Setlik na nduku bụ nri ọkụkụ nke ezinụlọ m na-eto kemgbe afọ iri isii. O bu ihe nwute, obuna ugbo nwere otutu ihe omimi banyere oru ugbo anaghi achi ya nkpa ka o ghara idi ire. Iji nwee obi ike n'ọdịniihu, oge ikpeazụ anyị bịanyere aka na nkwekọrịta maka ịnye ngwaahịa na osisi nwere ọrụ. Ya mere, anyi nweziri ike idozi ọnụahịa ere nke ngwaahịa ikpeazụ anyị.
Ugbo anyị dị na steeti Rio Grande do Sul, nke ụnwụ dara ada n’oge gara aga, nke dugara na mbelata nke ihe a kụrụ. Anyị akụwo nduku na steeti a ihe karịrị afọ iri abụọ, anyị nwere ike ịsị na nke a bụ ụnwụ nri kacha njọ anyị hụrụ na mpaghara.
N’oge ochie, mpaghara anyị nwere ezigbo mmiri ozuzo n’afọ niile, mana anyị chọrọ ka anyị jide n’aka na anyị ga-enweta ezigbo nsonye n’oge ọhụrụ. Maka ebumnuche a, anyị gbaziri mmiri iji nweta mmiri. Anyị na-atụ anya na mmiri ozuzo ga-adị ka ọ dị na mbụ, mana ọ bụrụgodi na ihu igwe abụghị ihe anyị ga-achọ, anyị ka nwere ike ịmị ọtụtụ poteto.
Mmekọrịta ya na ụlọ ọrụ na-ahụ maka nhazi malitere n'afọ nke ọnọdụ ihu igwe dị njọ, mana anyị ka nwere mkpali ma kwenye na nkwado a ga-enyere ụlọ ọrụ anyị aka ịrụ ọrụ mgbe niile ma mepụta uru.
N'ozuzu, ọrụ nkwekọrịta na ịkwadebe mgbanwe ihu igwe bụ ụzọ anyị si ele anya n'ọdịnihu iji hụ na ụbọchị ezinụlọ kachasị mma na ọrụ ugbo anyị.
Ederede: Vinicius Silva
Tags: Brazilnduku na-eto
Webinar AHDB: Ọnwụ. Otu esi etinye uzo ozo diquat
Sergey Lisovsky: "YUGAGRO" na-egosi etu esi emebe mmemme steeti maka mmepe nke ụlọ ọrụ agro-ulo oru "
Ngwaahịa nke ndu iji chebe nduku n'ụzọ dị irè karị